Sidee loo dabooli karaa lafaha muuqaalka ah ee Google Earth - Geofumed
Oktoobar, 2007 Google Earth / Maps, Microstation-Bentley
Markii hore wuxuu ka hadlayay sida loola jeedo khariidadaha maaraynta Google Earth, hadda waxaan arki doonnaa sidaan oo kale ayaynu u sameynnaa orthophoto. Waxaa fahansan orthophoto, sawir ortho-hagaajiyay, kaas oo aan naqaanno juquraafi ahaantiisa.
Google Earth weydiiyo afar xabbadood oo macluumaad, kaas oo u dhigma xarumaha dhinac kasta oo ka mid orthophoto (eeg sawirka hoose), dad badan rumeysan yihiin in nidaamka uu leeyahay margin ah baadi tan iyo orthophotos of mahrajaan ma aha Roobka ah oo geesaha beego waqooyiga runta ah, halkii ay yihiin qaybo ka mid ah meridiyiin iyo isku mid ah.
Si kastaba ha ahaatee ma jiro qalad ah oo ku saabsan, sababta oo ah Google Earth weydiiyo maxay yihiin kuwa afar xuduudaha latitudes format orthophoto iyo longitudes, sidaas darteed waxaa loo baahan doonaa si aad u hesho afar.
Xaaladdan oo kale waxaan u maleyneynaa in aan ku sameyneyno Microstation.
Aan tagno talaabo talaabo ah:
Si aad u ogaato xogta sawirka
1 Ku muuji orthophoto in Microstation, waayo waxaad u furaysaa feyl, dooro maamulaha raster / lifaaq, naafo fursada isdhaxgalka goobta oo aqbal.
2 Haddii aadan arkin muuqaalka, ka xulo maamulaha rasterka leh badhanka jiirka midig oo dhaqaaji ikhtiyaarka «ku habboon raster si aad u daawato»
3 Hadda, si aad u ogaato isku-duwayaasha, dhaqaajiso aaladda / sanduuqyada qalabka / xyztext oo adeegso «sumadda isku-duwaha» amar
2 Waxaad ubaahantahay isku-duwaha dhibcaha udub dhexaadka xuduudaha orthophoto, sidaa daraadeed habka ugu fiican waa inaad sameysid xariiq ku wareegsan, hada dooro amarka "iskuduwaha sumadaha" oo guji barta udub dhexaadka xariiqda.
4 Tan waxaad horeyba u leedahay iskuduweyaasha x ugu yar, x uguyar, ugu yar, uguna sarreeya.
5 Jid ahaan, u dhoofi muuqaalka qaabab ay Google Earth taageerto, kiiskeyga waxay ku jirtaa .ecw, tan kaliya ee maareeyaha raadiyaha waxaad ku doorataa sawirka leh badhanka jiirka midig waxaadna doorataa «badbaadin sida», kiiskan waxaan u dhoofin doonaa .tif qaab
Isbeddelidda UTM isku duwista Juqraafiga
Inkastoo aad si toos ah ula xiriiri karto dadka kale dejinta Laga soo bilaabo microstation, waxaan had iyo jeer ku sawiri doonaa tilaabadan.
6 Meeshaydu waxay ku taal Honduras, iskuduwayadaydu waa sidan soo socota: X = 489885.60, Y = 1579986.30 X = 493260.30, Y = 1577678.70
Marka aan u baahdo in aan u beddelo latitudes iyo dheeraadka, waxaan u isticmaali doonaa boggan tan iyo saaxiibkayaga Gabriel Ortiz Boggaagu wuu hooseeyaa. Goobtan waxaan dooranayaa spheroid, kiiskeyga waa Clarke 1866, ka dibna aaga, kaas oo ah 16, hemisphere waqooyiga (N) oo waxaan galayaa isuduwaha.
Maaddaama Google Earth ay i weydiinayso xogta qaab qaab jajab tobanle ah, waxaan u beddelaya sekanno jajab tobanle aniga oo u qaybinaya lixdan, ka dibna isku mid daqiiqadihii iyo isugeynta. Nidaam la mid ah ayaa lagu sameeyaa afarta isku duwaha, ha wareejinin sababta oo ah qaabkan iskuduwaha qaab jajab tobanle labaad ah wuxuu ka dhigan yahay masaafo aad u weyn. Waxa kale oo aad tan ku samayn kartaa barnaamij khaas ah, oo ah kuwa badan oo halkaa jooga, maahan mawduuca boostada.
U keenista sawirka Google Earth
7 Furan Google Earth oo raadso in ka badan ama ka yar waddanka halkaas oo lafaha uu noqon doono; Waxaan u maleynayaa inaad leedahay Google Earth xiray sababtoo ah waxay kharash badan ku cunaysaa.
8 Xullo doorashada «ku dar sawir muuqaal ah«, Waxaad ka raadineysaa masawirka biraawsarka waxaadna u bixisaa magac faa'iido u leh ujeedooyinkaaga
9 Qeybta ugu dambeysa ee guddigaas (goobta) Waxaad soo gashaa afar xiriiriye ee qaababka jajab tobanle ah, ka taxadar inaadan tirtirin calaamada darajada.
10. Hadda isku day inaad ku dhajiso aagga, waxaad arki doontaa qiyaasta qiyaasta ah; calaamad wanaagsan ayaa ah in sanduuqa uu leeyahay qaabka sawirka.
11 Waqtiga, ka sarreeya tabeedka gudigaan waxaad dooran kartaa qiime hufnaan, ka dib xulashada “aqbal” waana taas.
Tan xigta waxaan isku dayi doonnaa dariiqa kale ee ku xeeran, ka soo dejiso sawir Google Earth oo aan abuuri karno juqraafi ahaan. Nasiib wacan oo ii soo sheeg haddii aan kuu soo diro farriin qaab aan sax ahayn :)).
Post Previous«Previous Sida loo sameeyo Manifold waxa aan ku sameeyo ArcGIS
Post Next Koorsada ArcMap oo dhameystiran oo Isbaanish ahNext »
5 Jawaab in "Sida loo daboolo lafa gurista Google Earth"
Dina isagu wuxuu leeyahay:
Goob wanaagsan ... mahadsanid ...
Heerka heerarka ee laga sameeyay Google Earth wuxuu ka yimaadaa qaabka dijitaalka ah ee SRTM, taas oo, sababtoo ah waxay leedahay muraayad caalami ah, waxay leedahay sharaf aad u xun shaqooyinka degaanka.
qof kasta oo wanaagsan
Waxaan ku cusubahay tan laakiin waan ka shakisanahay in khaladaadka khaladka ah uu leeyahay khadadka laga soo saaro dhulka google-ga ee 3d
Fiid wanaagsan… Waxaan u maleynayaa in kulankani yahay mid wanaagsan. waad ku mahadsan tahay waxaan ku sugi doonaa su'aalaha qaar
Waxaan helay qaab aan sax ahayn !!!